“Ujeedada socdaalkaygu waxay ahayd xuska YOGA.” Safiirka Hindiya waraysi gaar ah – Radio Daljir
“Ujeedada socdaalkaygu waxay ahayd xuska YOGA.” Safiirka Hindiya waraysi gaar ah
Luulyo 2, 2019 3:43 g 0
“Ujeedada ugu weyn ee socdaalkayga wuxuu ahaa inaan u dabaal degno maalinta caalamiga ah ee YOGA, waxaan qabanay laba xafladood oo mid uu nagala qaybgalay Madaxweynuhu.” Safiirka India ee Soomaaliya Amb. Rahul Chhabra oo waraysi gaar ah siiyey Radio Daljir
Safiirka ayaa waraysiga kaga jawaabaya su’aalaha “maxay salka ku haysaa YOGA, ma dhaqan baa mise diin?” Waxaan kaloo weydiiney adeegyada caafimaad ee Hindiya oo Soomaaliya lagaga faa’iidaysan doono iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada casriga ah ee Satalaydka ka ayuu safiirku faahfaahinayaa.
Qodobo kale oo xiiso badan ayaa kujira waraysiga Safiirka. WariyeKhadar Awl Ismail ayaa safiirka ku waraystay khadka Skype-ka.
Waraysi gaar ah
"Ujeedada ugu weyn ee socdaalkayga wuxuu ahaa inaan u dabaal degno maalinta caalamiga ah ee YOGA, waxaan qabanay laba xafladood oo mid uu nagala qaybgalay Madaxweynuhu." Safiirka India ee Soomaaliya Amb. Rahul Chhabra oo waraysi gaar ah siiyey Radio DaljirSafiirka ayaa waraysiga kaga jawaabaya su'aalaha "maxay salka ku haysaa YOGA, ma dhaqan baa mise diin?" Waxaan kaloo weydiiney adeegyada caafimaad ee Hindiya oo Soomaaliya lagaga faa'iidaysan doono iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada casriga ah ee Satalaydka ka ayuu safiirku faahfaahinayaa.Qodobo kale oo xiiso badan ayaa kujira waraysiga Safiirka. Wariye Khadar Awl Ismail ayaa safiirka ku waraystay khadka Skype-ka.
Posted by Radio Daljir on Tuesday, July 2, 2019